Apple က iOS 11 Beta 8 ကိုအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple က iOS 11 Beta 8 ကိုအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလွှတ်တင်လိုက်သည်
ငါတို့လာနေပြီ Apple Device များအတွက် Operating System အသစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း, လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုထပ်ထည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းအားလုံး၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကတိပေးသော operating system အသစ်များ။ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စက်တစ်ခုပေါ်တွင်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုပေါ်တွင်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ iOS 10 တွင်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ iOS 11 အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်အတွက်ခြေလှမ်းလှမ်းတယ်
အရာရာတိုင်းဟာအတော်လေးမြန်ဆန်တဲ့အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေ့နေသည် IOS ကို 8 Beta ကို 11 ယခင် Beta စတင်ပြီးတစ်ပတ်အကြာတွင်၎င်းကိုဆိုလိုသည် ကျနော်တို့ကလာမယ့်စက်ပစ္စည်းများ၏တင်ဆက်မှုကြေညာသည့် Cupertino ယောက်ျားတွေနဲ့အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည် ထို့ကြောင့်၏ပစ်လွှတ် နောက်ဆုံးဗားရှင်း ဤအဘို့အ operating system မြား၏။ ခုန်ပြီးနောက်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပေးပါ ဤ Beta မူကွဲအသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ.
iOS 8 ၏ Beta 11 တွင်အသစ်တစ်ခုရှိမရှိကိုမကြာမီသိရှိရန်စောလွန်းသေးသည် သတင်းအားလုံးနှင့်အတူငါတို့တင်မည်ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့အရာက ယခုသင်သည် iOS 11 ၏ Beta ဗားရှင်းအသစ်ကိုယခု download ရယူနိုင်သည်။ ယခင် Betas တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောပြသနာများကိုပြုပြင်ရန်နှင့် iOS 11 Beta7တွင်မပြင်ဆင်ရသေးသည့် Beta ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ iOS 11 Beta7သည်ဘက်ထရီကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည် iOS 11 Beta6နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါအသစ်ပဲ iOS 11 Beta 8 သည်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသင့်သည်.
ထို့အပြင် iOS 11 beta 8 သာမက (15A5368a build) သာမကကျွန်ုပ်တို့တွင်အသစ်ရှိသည် watchos4beta ကို 8 (15R5371a), tvOS 11 beta ကို 8 (15J5374a) နှင့်အသစ် MacOS High Sierra 10.13 beta 8 (17A358a) ။ အများဆိုင် Beta version ကိုမကြာမီရောက်ရှိတော့မည့် Beta ဗားရှင်းများ၊ နောက်နာရီအနည်းငယ်သို့မဟုတ်မနက်၌ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤ Beta ဗားရှင်းအသစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS 11 Beta 8 ကိုအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလွှတ်တင်လိုက်သည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်တော့မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာဖြစ်ရန်လိုသည်၊ ယခင်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်နေပြီ။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း, အသေးစိတ်ပြီးသား polished လျက်ရှိသည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်မလားငါ့မှာ iPhone 3G ရှိတယ်၊ Whatsapp ကိုငါမ download နိုင်ဘူး။ ငါ့မှာ Cydia ရှိတယ် (3G unrestrictor) ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတယ်၊ အဲဒါကိုအသစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ၊ ငါဝယ်ပြီးသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမကျန်တော့ဘူး ငါစိတ်ပျက်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်အတူတူပါပဲနဲ့ acer အတွက်တစ်ခုခုပျောက်နေတာကငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်တယ်
IOS 10.3.1 kernel exploit သည် 64-bit devices များအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
iPhone 8 နှင့် Note 8 အသစ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း